Maalinta: 3-ka July, 2018
Akçaray Line oo loo qaabeeyey Duufaanta Dhuxusha
1 by Kocaeli Metropolitan Dawlada Hoose Khadka tareenka ee Akçaray, oo adeeg ka bilaabay degmada İzmit ee Agoosto 2017, wuxuu siiyaa muwaadiniinta safar deg deg ah oo aamin ah. Sii wadida u adeegida muwaadiniinta Dawladaha Hoose ee Magaalada Akçaray [More ...]
Vatma's Attention Life Savings
Vatman isticmaalaya taraam ku dhex wareegaya magaalada Kocaeli ayaa ka hortagay shil suurta gal ah. Akçaray, oo ay maamusho Kocaeli Magaalo Weynta GaadiidkaPark A.Ş. [More ...]
Shuruudaha Cusub ee Mashruuca Mashruuca Tareenka Qaranka
Turkey tareenka iyo Engine Industry Inc. (TÜLOMSAŞ) General Directorate of Railway National la shaqeeya doonaa mashruuca lahaa in la bedelo ee imtixaanka gelitaanka la sameeyey si loo ogaado injineerada heshiiska. Shaqaaleynta Agaasinka Guud ee TÜLOMSAŞ ee Mashruuca Tareenka Qaranka [More ...]
İsa Apaydın Raillife oo ka hadlaya Magazine
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın Magazine raillife ayaa ku qoray qodobka July. İsa Apaydınyaz Inta aan ka shaqeyneyno isku xidhka waddankeenna shabakadaha xadiidka xawaaraha Sare iyo Xawaaraha, [More ...]
Erzurum Station Building ayaa dib loo habaynayaa
Wax ka badalida daboolida dabaqa ah ee Dhismaha Saldhigga Tareenka Erzurum iyo Shaqada Qabanqaabinta WC Naafada waxaa lagu xanaanayn doonaa hanaan furan oo ku habboon qodobka 4734 ee Sharciga Wax Soo iibsiga Dadweynaha 19. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan hindisada [More ...]